Xiyyeeffannoo Waraanni Liyyuu Hayilii jedhamuufi humna waraana ADWUI deegaramu Itti Yaadamee Uummata Oromoo Godina Harargeefi daangaalee – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsXiyyeeffannoo Waraanni Liyyuu Hayilii jedhamuufi humna waraana ADWUI deegaramu Itti Yaadamee Uummata Oromoo Godina Harargeefi daangaalee
Xiyyeeffannoo Waraanni Liyyuu Hayilii jedhamuufi humna waraana ADWUI deegaramu Itti Yaadamee Uummata Oromoo Godina Harargeefi daangaalee
Xiyyeeffannoo Waraanni Liyyuu Hayilii jedhamuufi humna waraana ADWUI deegaramu Itti Yaadamee Uummata Oromoo Godina Harargeefi daangaalee Oromiyaa gama bahaa, kibbaafi kibba bahaa Irraatti itti fufinsaan gaggeeffama jiru kana keessa:
1. Dr #Abiyi_Ahimedi fi Obboo #Lammaa_Magarsaa harka keessa qabu moo hin qabanii???? moo aangoon dhimma Ethio-Ertiraa Murteessuu Uummata Oromoo irraa waraana dhaabsisuu hin danda’uu???????
2. Yoo harka keessa hin qabaanne maaliif uummata Oromoo irraa dhaabsisuu hin dandeenyee?????
3. Dhaabsisuuf tarkaanfiin isaan fudhatan maaltu jiraa??
4. Marraa hedduu Hariiroo obbolummaa cimsinaa jedhanii utuu Uummatni Oromoo waraana Abdii Illeen dhumaa jiruu Dr Abiyi fi Lammaan Abdii Illee waliin walgayii taa’aa hin turree??? Uummata Oromoo irratti jajjabessani waan deebi’an fakkata.
5. Tarkaanfii Murtii Aljeers Dhimma Ethio-Ertiriraa moo Dhimma uummata ni bulchina jedhan irraa waraana dhaabsisuutu dursaa??
6. Sababaa waraana qindaa’aa uummata keenya daangaarra jiraatu irratti labsameen labbuun ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa’amu dhumaa jiruuf eenyuutu itti gaafatama??
7. Utuu akka sabaatti uummata Oromoo irraatti waraanni qindaa’aan kun labsamee Uummaatni Oromoo dhumaa jiruu ilmaan Oromoo muraasni diasporaafi actiivistootni OPDO maaliif maqaa haaromsa jedhuun guyyuu uummata Oromoo gurraa duchuu filatan? Yakka waraanaan har’a uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruf naatoofi rifaatuun lammii ofii maaliif warra olola diinaa afarsuu filatetti hin dhagahamnee????
Uummaatni Oromoo hundi bakka jirruu uummata keenya waraanaan dhumaa jiruuf haa dirmannu, uu…uu…..!! jedhaa iyyaa iyya dabarsaa hanga ammaatti uummaatni Oromoo kan sochii warraaqsaa keessatti wareegame malee kan waraana qindaa’aa kanaan wareegaman kumootaan lakka’amu. Kanneen qe’eef qabeenyarraa buqqa’an miliyoona tokkoof walakkaa olitti lakkaa’amu. Dhumaatiin lammii keenya Oromoo hundatti dhagaahamuu qaba. Lola qindaa’aa harka mootummaa ADWUI’n Uummata Oromoo irratti gaggeeffama jiru kana haala fedheen utuu wal hin qoodne tokkummaan haa dirmannu sirnicha hundeen of irraa buqqisuun furmaata ta’uu hunduu amanee fudhatu qaba!!
Ka’ii Oromoo akka sabaatti!!
Via: Ibsaa Nagaasaa
OMN: ODUU Amma Nu Gahee: Oromia Media Network – https://t.co/uyvFYgkTCP pic.twitter.com/IhnBxz6Wra
— Kichuu (@kichuu24) June 9, 2018
OMN: Magaalaa Hararitti dargaggoonni heddu rasaasan rukutaman. Wax 9/2018 – https://t.co/c0OEMQX7Ir pic.twitter.com/1JzGPNEeNB
OMN: ODUU Amma Nu Gahee: Oromia Media Network
Oromiyaa: DAANDIIN HARAR ARETANYA IRRATTI CUUFAME JIRAA.